Fasaxyada qowska - InfoFinland
Nolosha Finland > Shaqo iyo ganacsi > Xuquuqda iyo waajibaadka shaqaalaha > Fasaxyada qowska
Markii ay qoyska ilmo u dhashaan, waalidiintu waxay xaq u leeyihiin inay qaataan fasaxa qoyska, ayna ilmaha guriga ku haystaan.
Fasaxa qoysku waa
fasaxa daryeelka caruurta
Horay u ogeysii shaqo-bixiyahaada ugu yaraan labo bilood fasax qoyska.
Fasaxyada qoysku inta badan waa fasaxyo mushaar la’aan ah. In mushaar lagaa siiyo waqtiga fasaxa qoysku wuxuu ku xiranyahay heshiiska shuruudaha shaqadaada. Arrinta ka hubso shaqo-bixiyahaada.
Keladu waxey bixineysaa inta lagu jiro fasaxyada qoyska manfacyada qoyska, yacni lacagta gunno maalmeedka waalidka iyo kaalmada guri ku heynta. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha manfacyada qoyska ka sii aqri bogagga InfoFinlandi Kaalmada dhalashada ilmaha kadib iyo Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.
Markii fasaxyada waaliku dhamaadaan, qofka shaqaalaha ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ku noqdo shaqadiisii hore ama shaqo u dhiganta isla meeshii hore oo uu ka shaqeyn jiray. Hooyada uurka leh heshiiska shaqadeeda lama burin karo, lagumana takoori karo uurkeeda awgiis.
Dalka Finland shaqo-bixiyeyaasha iyo shaqaaluhuba way yaqaanaan fasaxyada qoyska wayna isticmaalaan fasaxyadaas sida badan.
Fasaxyada qoyskaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Macluumaadka kaalmooyinka qoyska ilmaha lehFinnish | Iswidish | Ingiriis | Ruush | Estoniyan
Fasaxa hooyanimadu wuxuu dhan yahay 105 maalin shaqo. Fasaxa hooyanimada inta lagu jiro shaqada waa la ogol yahay, haddii aysan dhibaataynayn nabadgelyada hooyada, ilmaha uurka ama kuwa kale. Si kastaba ha ahaatee hooyadu wax shaqo ah ma qaban karto inta lagu jiro labada usbuuc oo ka horeeya waqtiga dhalmada loo qabtay, sidoo kale hooyadu wax shaqo ah ma qaban karto labada usbuuc oo dhalmada ka dambaysa.
Fasaxa aabuhu waa qeyb kamid ah fasaxa waalidka oo loogu talagalay in uu aabuhu qaato. Tirada fasaxa aabuhu waa marka la isugu geeyo 54 maalmood oo maalamaha shaqada ah. Maalmahan looma wareejin karo hooyada.
Waxaad qaadan kartaa ugu badnaan 18 maalmood oo maalmaha fasaxa aabaha ah islawaqtiga ay hooyada cunuggu ku jirto fasaxa hooyanimada ama waalidka. Maalmahan waxaad u qeybin kartaa ugu badnaan afar qeybood.
36 maalmood ee haray waxaad ugu badnaan u qeybin kartaa labo xilli. Inta maalmahan lagu jiro hooyadu kuma jiri karto fasaxa waalidka. Ujeedadu waa in uu aabuhu cunugga xannaaneeyo. Waxaad sidoo kale hooyada la qaadan kartaa gebi ahaan 54 maalmood waqtiyo kala duduwan.
diga ayaa go’aan ka gaari kara inaad fasaxa aabaha wada qaadaneyso iyo inaad qeyb ka qaadaneyso. Maalmaha fasaxa aabaha waxaa loo isticmaali karaa oo kali ah xannaaneynta cunugga kayar 2 sano. Marka uu cunuggu buuxiyo labo sano ma sii isticmaali kartid fasaxa aabaha haddii ay xitaa wax kaaga dambeeyaan.
Fasaxa hooyanimada ka dib hooyada ama aabuhu waxay joogi karaan guriga ayagoo qaadanaya fasaxa waalidka, si ay ilmaha yar guriga ugu xanaaneeyaan. Fasaxa waalidku waa 158 maalmood oo ah maalamaha shaqada. Labada waalid hal mar fasaxa waalidnimada islama qaadan karaan. Fasaxa waalidka waxaa loo qeybsan karaa sidoo kale in hooyada iyo aabuhu ay si kaltan ah cunugga guriga ugu xannaaneeyaan.
Fasaxa waalidka kadib hooyada ama aabaha ayaa geli kara fasaxa xannaaneynta oo mushaar la’aan ah inta uu cunuggu ka buuxinayo 3 sano.
Waxey ku xiran tahay in hooyada ama aabuhu ay hal shaqo-bixiye ugu yaraan 6 bilood u shaqeynayeen sanadki la soo dhaafay. Inta lagu jiro fasaxa xanaanada, Kelada ayaa bixineysa kaalmada guri ku xanaaneynta. Shuruudaha guri ku xanaaneynta ka fiiri bogga InfoFinlandi Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.
Fasaxa xannaansynts qabyada ah
Fasaxa xannaaneyntu wuxuu noqon karaa mid bar ah. Shaqo-bixiyaha yo shaqaalaha ayaa ka heshiinaya fasaxa xannaanaynta qabyada ah. Markaas waxaad sameyneysaa waqti shaqo oo gaaban adigoo helaya mushaar kayar kii hore. Sido o kale labada waalid waxay qaadan faasaxa waalid nimada oo qabyada ah, tusaale ahaan midkood wuxuu yareynaya saacadaha subixii uu shaqeeyo kan kalena saacadaha galabtii ayuu yaraynayaa. Waxaad ku jiri kartaa fasaxa xannaaneynta ee barka ah inta uu cunugaadu ka dhameynayo fasalka labaad ee iskuulka.
Waxaad Kelada uga codsan kartaa lacagta xannaaneynta aan xaddidnayn ee cunugga 3 sano kayar iyo xannaaneynta cunugga fasalka 1aad iyo 2aad ku jira haddii aad Guri degmo ku leedahay Finland. Lacagta xanaaneynta ee aan xaddidnayn laguma heli karo xannaaneynta cunugga buuxiyay saddex sano ee aan weli iskuulka gelin.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan lacagta xanaanada aan xaddidnayn iyo tan qaybyada ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Kaalmada guri ku xanaaneynta ilmaha.
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 01.06.2020 Boggan war-celin ka soo dir